Ọdachi na Social Media | Martech Zone
Ọtụtụ n’ime unu amaghị m n’onwe m, mana a zụlitere m na Newtown, Connecticut. Ọ bụ ihe ịtụnanya obere obodo toro n'ụzọ dị egwu ma agbanwebeghị nke ukwuu kemgbe m bi ebe ahụ. Mgbe m dị obere, anyị ga-elele ihe nkiri na Halllọ Nzukọ Obodo, gaa na Blue Colony Diner maka ice cream, ma gaa ụka St Rose nke Lima na Sọnde. Ndị obodo tụkwasara onwe ha… Papa m nọ na ngalaba ọrụ afọ ofufo na-ahụ maka ọkụ mgbe anyị bi ebe ahụ. Nnukwu ndị mmadụ, obodo dị egwu.
Otu n'ime ndị ezi-na-ụlọ ezi-na-ụlọ anyị nwere nwa nwoke nke anwụghị n'ime ọdachi a - anyị niile na-ekpe ekpere maka ha na ezi-na-ụlọ ndị tufuru nnukwu ihe n'ime ihe egwu a.
Mgbe ihe dị ka nke a mere ma tinye esemokwu na ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị ka egbe, enwere ezigbo ihe egwu na-atụle ma ọ bụ tinye echiche gị n'ịntanetị. Arụmụka nwere ike ibute ngwa ngwa iwe na ọbụlagodi ịkpọasị mgbe mmadụ gosipụtara echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha n'ihi na ndị metụtara nke a emebeghị ka ha zuru ike.
Achọrọ m ịchụpụ ụfọdụ ndụmọdụ m chere dị mkpa maka ụlọ ọrụ na ndị mmadụ n'otu n'otu:
nkịtị nwere ike ịbụ mmeghachi omume kwesịrị ekwesị. Ezigbo enyi Chuck Gose kwuru na NRA mechiri ibe Facebook ha ma kwụsị imelite akaụntụ Twitter ha. Ekwetaghị m na e nwere azịza dị mma karịa nke ahụ nyere ọnọdụ ahụ. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eche na ọ bụ ọrụ nke PR iwepụta nkwupụta. Ekwetaghị m. Mgbe ụfọdụ ihe kachasị mma ị ga - eme bụ ịgbachi nkịtị.
Kekọrịta gị echiche ga-emeghe gị imegide. N’ikwu okwu n’ụzọ doro anya ma dị mfe, itinye onwe gị n’akụkụ otu arụmụka ma-ọbụ nke ọzọ ga-akpali nzaghachi. Ọ bụrụ na ị nwere echiche siri ike otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ na ị kwupụtara ya - ya ejula gị anya na a ga-awakpo gị n'ihu ọha, kwaa gị emo, tụgharịa ma ọ bụ nwee echiche ọzọ nwere mmasị. Kekọrịta echiche gị chọrọ ntozu okè. Ọ bụrụ na i torubeghị ime ihe ọ bụla a gwara gị, emeghela onwe gị.
Nkwurịta nwere ike na-arụpụta. Mgbasa mgbasa ozi na-enye ụzọ iji kwenye na ndị mmadụ ma ka na-eche banyere njedebe. Ahụla m mkparịta ụka na-enweghị atụ na mmegharị nke 2, ọrịa uche, akụkọ banyere oke mmadụ, na ozi ịhụnanya na nkwado ụbọchị ole na ole gara aga.
-eche bụ ụzọ ọzọ. Ọ bụ ezie na nzaghachi mmekọrịta mmadụ na ibe ya kacha mma mgbe enwere azịza ozugbo, ihe omume ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị ka nke a nwere ike ịkpọ usoro dị iche. Akwụsịrị m Tweeting ma belata njikọ Facebook m. Echere m ka m biputere nke a ụbọchị ole na ole ka m wee nwee ihe na-ewuli elu ikwu kama ịgbakwunye na ntiwapụ nke echiche, arụmụka na arụmụka n'ebe ahụ. Ọ bụrụ na ị ga-echere ruo mgbe obi jitụrụ ndị mmadụ ike, mkparịta ụka unu ga-aba uru karị.
Social media bụ a ajụ. Ọ bụghị naanị onye ọzọ ka ị na-agwa okwu. Ọ bụ usoro nkwukọrịta ebe etinye ozi gị na ọhaneze ka enyocha ya, n'agbanyeghị ebe ị biputere ya. Onye na-ajụ mmụọ ihe na-enye ndị na-achọ ime ihe ọma ihe nchebe, na ọta iji zoo n’azụ ndị chọrọ ime ihe ọjọọ.
Mgbe mgbawa ụlọ mere ebe a na Indianapolis, anyị hụrụ ezigbo ihe niile soshal midia nwere ike ịkpalite. O nyere usoro nkwado, ozi, okwukwe, ozi olile anya ma weta ezigbo enyemaka nye ndị ahụ metụtara.
Enwere m nchekwube, agbanyeghị arụmụka ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na soshal midia ga-emecha bụrụ ike dị mma n'ịgwọ obodo a. M na-ele ugbua dị ka ndị enyi m na Newtown eji Facebook ịkọrọ ha mmetụta, obi nkoropụ, olileanya na obi ụtọ na nwa ha nwoke dị ndụ. Ọ bụ ezie na anyị enweghị ike iwepụ onwe anyị na crazies, enwere olile anya na anyị nwere ike ịmụta etu esi eji ajụ ase eme ihe ọma. Ma ọ bụ mụta mgbe ị gaghị eji ya ma ọlị.
Tags: newtownsoshal midia ọdachi
Dec 17, 2012 na 9:23 PM
Nnukwu okwu Doug! Echetara m na ị ma na ị tolitere na Connecticut mana amataghị na ọ bụ Newtown. Daalụ maka ịkekọrịta nghọta ndị a na ndị na - agụ akwụkwọ gị yana obodo n’obodo.
Dec 17, 2012 na 10:06 PM
Daalụ @bnpositive: disqus. Ọ dịtụghị mgbe m chere na onye ọ bụla ga-anụ banyere Newtown, CT. Ọ dị egwu na-ele ya ka ọ na-apụta na akụkọ ahụ ma hụ ka ndị enyi ezinụlọ m na-ekwu banyere ya ka ọ na-apụta.
Dec 17, 2012 na 11:01 PM
Ihe egwu ozo di na mkparita uka banyere mkparita uka nke ndi mmadu banyere akuko ojoo bu na o bia dika nrigbu - dika mgbe ndi nta akuko ji igwe okwu n’iru onye onye ha huru n’anya. Gbachi nkịtị na-abụkarị ihe kwesịrị ekwesị.
Dee 19, 2012 na 12: 57 AM
Anyị nwere ike ịbụ otu ìgwè na-elekọta mmadụ na mgbasa ozi mmekọrịta. Ruo awa ole na ole n’ụbọchị ahụ, anyị chere na ọ bụ nwanna nwoke ahụ. Cheedị ma ọ bụrụ na ndị na-agba bọs ọ na-atụ ụjọ na ọ ga-agụ tweet - ọ bụrụ na onye ahụ na-agba ụta ka dị ndụ. Ọ gaara aka njọ.
Na Richard Engel. Enwere m ike ịhụ ihe kpatara NBC ji tinye ya mgbasa ozi mgbasa ozi ruo mgbe a hapụrụ ya. Ọ bụrụ na ọ gbanye ngwa ngwa ọ bụla onye maara ihe nwere ike ime ya.
Ndị mgbasa ozi mgbasa ozi na-amalite ịgbapụ ihe ọ bụla banyere akụkọ ha nụrụ na ụlọ ọrụ akụkọ na-amalite ịhapụ usoro iji kwado ma jigide ọsọ ha, na-agbanye na mgbasa ozi mgbaghara dị ka a ga - asị na ha bụ ụlọ ọrụ na - ere ahịa okpuru naanị iji mee ka ndị na - akwado ha. Nnukwu ebe na-amị amị.
Nke ka mkpa - enwere obi uto na ndi enyi gi na ndi ezin’ulo gi lafere ghari nke ndi Russia na # Newwown na Fraide Ọ naghị eme ka ọnọdụ ahụ bụrụ ihe jọgburu onwe ya na ọ bụghị ngaji shuga iji nyere ọgwụ ahụ aka ịgbada mana opekata mpe ọ nwere ike ịkọ akụkọ ha ma sọpụrụ ndị 27 (na-eche na 28 nwụrụ anwụ - 1 onye aha ya ga- agaghi-ekwu okwu ozo).
Knowingmara gị, bromance, ị ga-asọpụrụ ha n'ụdị.
Mee ka m mara ihe m nwere ike ime iji nyere aka, ọkachasị ma ọ bụrụ na ọ nwere ike ị karịrị Twitter na Facebook!
- gị mentee
Dee 20, 2012 na 6: 46 AM
Nke a bụ ezigbo ihe ọmụma blog & enwetara m ihe ọmụma na blog nke ọma. Biko debe ya maka ikenye.